“နှလုံးသားလက်ဆောင်” အပိုင်း(၄) -မိုးရိပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » “နှလုံးသားလက်ဆောင်” အပိုင်း(၄) -မိုးရိပ်
Posted by aung nainglin on May 25, 2012 in Copy/Paste |7comments
ဖြစ်ခဲ့ သမျှ အရာရာအားလုံးဟာအကောင်းလို့ မှတ်ယူရမှာပေါ့။ မနေ့ က ဖြစ်ခဲ့ ပြသာနာအားလုံးကို သူငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြမိသည်။ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စလုံးကလဲစိတ်ဝင်စားစွာ နာထောင်နေကြပြီလေ။ သူပြောလို့ အဆုံးသက်လဲရောက်ရော ၀င်းထွန်က ပြောလေတော့သည်။
“ဟ……….မင်းဇော် မင်းတို့ ဇာတ်လမ်းက ဖိနပ်ကနေစခဲ့ တာပဲကွ……….”
“ဟုတ်တယ်ကွာ ………..သင်တန်းအပ်ဖို့ ဆုထားတဲ့ ပိုက်ဆံက အဲ့ ဒီဖိနပ်တစ်ရံအတွက်နဲ့တစ်ဝက်ကုန်သွားတယ်လေ……..”
“အေးပေါ့ကွာ..ဘယ်လိုလုပ်အပ်နိုင်တော့မှာလဲ …….. ပိုက်ဆံက တစ်ဝက်ပဲရှိတော့တာ…..ငါလဲစိတ်ညစ်ပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ တယ်ကွာ……….”
သူတို့ သုံးယောက်မှာ မင်ဇော်ထွန်းက အဆင်းရဲဆုံးပေါ့။ ဖခင်ဆုံးသွာပြီးနောက်သားအမိနှစ်ယောက်တည်းပင်ပန်းစွာ ရုံးကန်နေရတဲ့မင်းဇော်ထွန်းမှ ဒီလိုဖြစ်ရယ်လို့ ကံကြမ္မာရယ်။ မင်းခန့် က ဂရုဏာဖြစ်ပြီးဝင်ပြောလေသည်။
“ဘာလဲ မင်းခန့်ပြောလေကွာ………..”
“ ဒီပြသာနာကို မင်းအမေ သိပြီးပြိလား……………..”
“ဘယ်သိပါ့မလဲကွာ….အမေ မသိအောင်ငါနေရတာပေါ့ကွာ..အမေသိရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာကွ….ငါလဲ အမေစိတ်ဆင်ရဲမှာမမြင်ရက်ဘူးလေ…
အဲ့ ဒါကြောင့်မပြောပဲနေလိုက်တော့တယ်………..”
“ဒီလိုလုပ်ကွာ……မင်းသင်တန်းအတွက် သင်တန်းကြေးကို ငါတို့ နှစ်ယောက်ကူညီမယ်ကွာ.ဘယ်လိုလဲ……”
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူငယ်ချင်းရယ် ဒါပေမဲ့ …ငါမယူချင်ဘူးကွာ ဒီသင်တန်းဟာလဲ ငါနဲ့ မထိုက်တန်ဘူးလို့ ပဲသတ်မှတ်လိုက်တော့မယ်…..”
“ ဒီလိုလဲ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲကွာ မင်းနဲ့ ငါတို့ ဆိုတာ ဟိုးငယ်ငယ်လေးကတည်းက အတူတူကြီးလာခဲ့ တဲ့ သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေပဲကွာ…..
အဲ့ ဒီလိုတော့မပြောသင့် ဘူးကွာ.”
“အေးကွာ…………မင်းအကူအညီလိုတဲ့ အခါကြရင် ငါတို့ အဆင်သင့် ရှိနေမှာပါ……..”
“ငါ ပြန်လိုက်အုံးမယ်ကွာ အမေ ငါ့ ကိုထမင်းအတူတူစားဖို့ စောင့် နေလောက်ပြီ…………”
ပြောပြီး ကော်ဖီဝိုင်းထဲက ထွက်သွားတဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မင်းဇော်ထွန်းရဲ့ကျောပြင်ကိုငေးကြည့် ပြီး ဂရုဏာသက်မိတာ ၀င်းထွန်းနဲ့ မင်းခန့် ရယ်ပါ။ စိတ်ထားကောင်းတဲ့ မင်းဇော်ထွန်း သူတပါးရဲ့ အကူအညီကိုမယူတက်ပဲ သူတပါးကိုသာကူညီချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့ သူ သူငယ်ချင်း မင်းရဲ့ ကံကြမ္မာက ဘယ်တော့များမှ လှပနိုင်မလဲကွာ။…………………….
“နင်ကလဲဟယ်………နေနိုင်လိုက်တာ ငါတို့ ဆီကိုတောင်ဖုန်းလေးဘာလေးဆက်ဖော်မရဘူး……..ငါတို့ အခု နင့် အိမ်ကိုလာနေပြီ နင်စောင့် နေနော်..”
စိတ်ကူးထဲမှာ တရိပ်ရိပ်ပေါ်လာတဲ့သူ့ ရဲ့ ပုံရ်ိပ်။ နောက်တခါများ ရှင်နဲ့ တွေ့ ခဲ့ ရင်………….
“ဟဲ့……မိန်းမ တစ်ယောက်တည်း ဘာတွေတွေးနေတာလဲ….မှန်မှန်ဖြေနော်…….ဟဲဟဲ…..”
“ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဟယ်………ကဲပြော နင်တို့ ငါ့ ဆိကိုလာတာဘာကိစ္စလဲ………”
“တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး……..3D သွားကြည့် မလို့ လာခေါ်တာ……”
စိတ်ကူးပေါက်ပေါက်နဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့် မယ်ဆိုပြီး သူငယ်ချင်နှစ်ယောက်သား ထွက်လာခဲ့ လိုက်သည်။ သူ့ စိတ်တွေညစ်နွမ်းနေသည်မဟုတ်ပါလား။ ဘာ့ ကြောင့် ရယ်တော့မသိ ရှင့် ကို နောက်တစ်ခါလောက်တော့တွေ့ ခွင့်ကြုံဆုံချင်သေးပါတယ် အမည်မသိသူရယ်။
“ဟေ့ကောင် ခဏနေအုံး ငါလက်မှတ်သွားဝယ်လိုက်အုံးမယ်…..”
“ဟာကွာ ဒီမှာတော့မစောင့် ချင်ဘူးကွာ ……….ဟိုမှာတွေ့ လား ကော်ဖီဆိုင် အဲ့ ဒီ့ ကိုလာခဲ့ လိုက် ငါ စောင့် နေမယ်..”
ပြောပြီးသူငယ်ချင်းကလက်မှတ်ရောင်းတဲ့ ကောင်တာဘက်သို့ ရှောက်သွားတော့ သူလဲ ညာဘက်မှာရှိတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ထဲသို့ရှောက်လာခဲ့ လိုက်သည်။ ကော်ဖီအေးတစ်ခွက်ကိုသောက်ရင်း ဖွင့် ထားတဲ့ သီချင်းအပေး သူ့ ရဲ့ စိတ်တွေက အလိုက်သင့် စီးမျောသွားလေသည်။ သိပ်မကြာလိုက်ပါ သူ့ ရဲ့ ဘေးချင်းကပ်ရက်ခုံသို့ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ဝင်လာတာကိုတွေ့ လိုက်သည်။ ခဏလောက်ကြာတော့…………..
အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်လာတဲ့ ကောင်မလေးကိုကြည့် မိလိုက်တော့ ဟိုတစ်နေ့ က သူကိုယ်တိုင်ဖိနပ်ဝယ်ပေးလိုက်ရတဲ့ကောင်းမလေးပဲဖြစ်နေလေသည်။ ကံကြမ္မာက တိုက်ဆိုင်လွန်းတော့ အံ့သြောမိပြန်ပြီကောင်မလေးရယ်။
“အင်း ….မှတ်မိပါတယ်ကွာ….ဒါနဲ့ ဘာကိစ္စရှိလို့ လဲ…..”
“ဟိုတစ်နေ့ က ကိစ္စကိုတောင်းပန်ချင်လို့ ပါ…….”
“အင်း…ကောင်းပြီလေ…..အစ်ကိုတို့ နဲ့တစ်ဝိုင်တည်း ထိုင်လို့ ရမလားဟင်…….”
“ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဟင် သက်ဆိုင်သူပါလာလို့ လား……..”
“မဟုတ်ပါဘူးကွာ ကို့ မှာ ပိုက်ဆံသိပ်မပါလာလို့ ပါ…..”
“သြော် ညီမတို့ ရှင်းမှာပါ….သူငယ်ချင်းအဖြစ်ပေါ့…..မဟုတ်ဘူးလား….”
“နေပါစေဗျာ ကို ယ့်အတွက်ပဲကိုယ်ရှင်းပါနော် ”
ဒီလို နဲ့ တစ်ဝိုင်းတည်း ထိုင်ဖြစ်သွားလေသည်။ ခဏနေတော့ လက်မှတ်သွားဝယ်တဲ့သူငယ်ချင်း မင်းခန့် ပြန်ရောက်လာလေသည်။ မင်းခန့် က သူ့ ကိုအံ့သြောတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့် လေသည်။ ပြီးတော့မှ စကားစပြောလေည်။……………..။…………….
ရှေ့ သို့ ဆက်ပါအုံးမည်။
ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ရှင်းတာ အကောင်းဆုံးပါ။
3D က ဘယ်မှာ ကြည့်တာလဲဗျ
ဂျက်လီဆိုတော့ ဒဂုံစင်တာမှာ ကြည့်ကြတာလား..
ဟုတ်လောက်တယ်။ ဒဂုံစင်တာ2ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ဇာတ်လမ်းက update ဖြစ်တယ်
အစ်ကိုရေ အားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
အခုလို သတိပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါနော်
လိုက်နာပါ့မယ်လို့ကတိပေးပါတယ်
စင်ဒရဲလားကတော့ ဖိနပ်ကျန်ခဲ့တာနဲ့ မင်းသားလေးနဲ့ ညားသွားသတဲ့ ။
ကျုပ်တို့ မိုးရိပ်လဲ ခေတ်သစ် စင်ဒရဲလား နဲ့ ဆုံခဲ့ရတာပ ။
အူးပေ ဖိနပ်ကျန်ခဲ့တော့ အရုပ်သည်ကြီးနဲ့ညားသွားတယ်မလားဗျ